Tuesday February 14, 2017 - 14:13:25 in Wararka
Wararka inaga soo gaaraya Gobolka Mudug ee Koonfurta Somaliya ayaa sheegaya in ciidamada Maamulka Galmudug iyo kuwa dowladda Federalka Somaliya ay qaadeen duulaan ka dhan ah Ururka Al Shabaab, gaar ahaan Degmada Xarardheere.
Ciidamadan ayaa shalay la wareegay gacan ku haynta deegaanka Camaara ee Gobolka Mudug, waxaana la sheegayaa ciidamada saaka inay cagta saareen wadada aada dhanka Degmada Xarardheere.
Xarardheere muddo sanado badan ah waxaa maamulaya dagaalyahanada Ururka Al Shabaab, balse saaka waxaa ka jirta dhaq-dhaqaaq ciidan oo ay wadaan dagaalyahanada ka tirsan Shabaab oo doonaya inay difaacdaan Magaaladan.
Ciidamada ku wajaha Degmada Xarardheere ayaa isugu jira ciidanka Galmudug iyo ciidamo ka tirsan Kumaandooska Somaliya.
Deegaanka Camaara nawaaxigiisa waxaa lagu arkayaa diyaarado joog hoose ku socdo, balse aanan la kala saari karin Ajaanib iyo Somali cida wadata, sida ay soo sheegayaan dadka deegaanka Camaara ku nool.
Saraakiil ka tirsan Maamulka Galmudug, ayaa Dhacdo.com u sheegay qorshaha inuu yahay sidii Shabaab looga saari lahaa Degmada Xarardheere, iyadoo laga taxadaaro khasaaraha rayidka ka soo gaari dagaalka iyo midka ciidanka soo gaari kara.
Ciidamada Huwanta ayaa labo jiho ka weeraray Degmada Xarardheere ee Gobolka Mudug, taasi oo kala ah dhanka wadada ka timaado Degmada Cadaado iyo dhinaca Xeebta oo ciidanka ay ka dhaqaaqeen dhanka Magaalada Hobyo.